Tady vy misy famolavolana tena mahomby ho an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Mazava fa ny tontolon'ny fehin-kibo ho an'ny Apple Watch Tsy manam-piafarana izany ary isan'andro dia afaka mahita fotokevitra vaovao mbola tsy fahita isika. Toy izany koa no nitranga tamiko rehefa hitako ilay fehin-kibo izay tiako aseho anao ny toetrany tsara anio.
Tady vy izay azonao vidiana amin'ny famaranana anodized efatra samihafa, izay novokarina teo ambanin'ny foto-tantaran'ny tantely ary natsangana amin'ny alàlan'ny sanganasa maro izay namboarina mba hamorona ny fehin-kibo farany.
Raha tianao ny tadiny amin'ny Apple Watch anao dia azonao antoka fa io dia ho iray amin'ireo izay ho tianao indrindra, ary ny vokatra aterak'izany amin'ny hato-tànana rehefa anaovanao azy dia miavaka. Araka ny hitanao amin'ny sary sy araka ny efa nofaritako teo aloha, Sombin-javatra polygon an-jatony maro no nampiasaina niraikitra mba hamoronana tadin-javatra malefaka sy tena namboarina.
Ny fanidiana azy io dia manome fiarovana fanampiny ka azontsika antoka fa tsy hisokatra izy io mandritra ny fotoana ananantsika azy. Misy loko efatra niavaka tsara amin'ireo izay ananany, ny volamena, ny volamena raozy, ny volafotsy ary ny vy mainty mamiratra. Ny vatofantsika mankany amin'ny Apple Watch dia manaraka ny fiheverana mitovy amin'ilay an'ny tadin'i Apple.
Ny vidiny dia 13,69 euros Ary azonao ampiasaina amin'ny tranga Apple Watch roa misy, ny 38mm ary ny 42mm. Ka raha ny fahitana an'ity lahatsoratra ity fotsiny no nahasarika ny sainao ary tonga hatreto ianao, dia manoro hevitra anao aho hitsidika ny rohy manaraka ary mividy ny anao izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Tady vy misy famolavolana tena mahomby ho an'ny Apple Watch
Podcast 9x11: Ny momba ny NAS Systems rehetra